Raim-pianakaviana saika hamoy fo noho ny tsy fananam-bola hitsaboana an-janany | L'Express de Madagascar – Actualités en direct sur Madagascar
14.03.2017 | 8:15 Onjam-piainana10
Lahitokana ny aina. Manao izay fomba rehetra namonjena an-janany amin’ny aretina nitarika tsy fahasalamana Ramoravelo Nicolas, raim-pianakaviana avy any Ankazobe. Voatery nampiakarina aty an-drenivohitra manaraka fitsaboana akaiky ny zanany lahy fahefatra, izay vao fito taona monja. Vola tsy toko tsy forohana no efa lany tamin’ny fitsaboana.
Amin’ity herinandro ity, no voatondro hiatrehan’i Fanomezantsoa Eugène fandidiana. Voalaza fa misy rano ny lohany ary mibontsina noho io rano io. Vola manodidina ny enina hetsy ariary no hiatrehana ny fandidiana. Mila fitaovana kely, izay mitentina roa hetsy sy iray tapitrisa ariary ihany koa hatsofoka sy hampidirina ao amin’ ny lohany. Kivy ary mila ho ketraka ny raim-pianakaviana mieritreritra sy mandinika ireo volabe ilaina maika amin’ny fanavotana ny ain-janany. Efa nisy mihitsy ny fotoana nahakivy azy tanteraka ary efa saika nitondra an-janany nody noho ny tsy fananana ireo volabe ilaina. Maniry mafy ny hiara-hody am-pifaliana amin-janany any an-tanàna, ankehitriny, Ramoravelo Nicolas. Mbola miankina tanteraka amin’ny fitsaboana, indrindra ny fandidiana hatao aminy anefa izany nofinofy izany.
Any Ampanikely, kaominina Andranomely fivondronan’Ankazobe no misy an-dRamoravelo Nicolas mianakavy. Mpamboly sy mpiompy no asan’izy mivady. Enina mianadahy no zanak’izy ireo, ka vao valo volana monja ny farany, raha 12 taona kosa ny lahimatoa. Zaza fahefatra i Fanomezantsoa Eugène. Tsy fantatra mazava ny antony tena niteraka ny tsy fahasalamana tampoka nahazo azy. Voalazan-dRamoravelo Nicolas fa tsy farary ary vao sambany no nitrangan’ aretina toy izao io zanany io. «Ny taona 2016 teo, nitaraina taminay fa maharary azy mafy ny lohany. Heverina ho toy ny aretina tsotra toy ny gripa, aretin’andoha,
harerahana, no nahazo azy. Tao anatin’ny iray volana, notsaboina tao an-trano tamin’ny alalan’ny fanafody efa mahazatra izy. Tsy nisy anefa ny fiovana ka teo izahay vao nikoropaka», hoy Ramoravelo Nicolas, Dadan’i Eugène mitantara ny nahazo an-janany tany
Nandeha ny fotoana sy ny andro, voalaza fa niha nitombo tsikelikely ny lohan’i Fanomezantsoa Eugène. Nanomboka nitarainany mafy io aretiny io. «Efa nahitana trangana lohan’ankizy miha lehibe toy ny nahazo azy tao an-tanànanay ary toy ny sitratsitrana teny ihany ny niafarany. Tsy nahatombina anefa izahay fa nanatona teny amin’ny CSBII nanao fizahana », manohy ny fitantarany, Ramoravelo Nicolas.
Nanahirana ny fitondrana ny marary niakatra tany amin’ny toerana fakàna taksiborosy. Dia an-tongotra natao nandritra ny ora enina no nodiavin’ ireo mpianakavy nitondra an’i Eugène. Notrotroina no fitondrana azy, izay tsy mitsahatra ny mitaraina eny an-dalana. Tsy vitsy amin’ny olona, indrindra ny Malagasy, ny fieritreretana zava-dratsy raha sendra mahitana na itrangana aretina hafahafa.
Toy izany ihany koa no nahazo an-dRamoravelo Nicolas.
« Noeritreretina ho nataon’olona na mosavy no nahazo an-janako. Tsy nanakana ahy tamin’ny fanatonana mpitsabo ihany anefa izany hahafantarana ny marina sy ny fitsaboana tokony hatao », hoy ilay raim-pianakaviana. Tsy vita tao amin’ny CSBII tany an-toerana ny fitsaboana an’i Eugène. Voatery nalefa nanatona hôpitaly ilay ankizilahikely. Teny amin’ny hôpitaly Bejofo Mahitsy no nitondrana azy voalohany, ny 15 janoary 2017 lasa teo. Noho ny fitombon’ny aretina dia nafindra teny amin’ny hôpitaly Befelatanana indray i Fanomezantsoa Eugène. Nitohy teny amin’ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona (Hjra) izany ary eny ihany koa no voalaza fa hiatrehany ny fandidiana.
Efa tena kivy
Tamin’ny fizahana natao, toy ny radio sy ny «scanner», no nahafantarana fa misy rano ny lohan’i Fanomezantsoa Eugène ka izany no nahatonga ny fivontosana. Ny volana febroary teo, no efa nisy ny vinavina hiatrehan’i Fanomezantsoa Eugène ny fandidiana. Tamin’izany no efa fantatra ny teti-bidin’ilay fitaovana kely na «valve» ilaina sy hampiasaina aminy, izay mitentina roa hetsy sy iray tapitrisa ariary. Io fitaovana io no voalaza fa hampidirina ao aminy hitroka sy hamoaka ny rano ao amin’ny lohan’i Eugène. «Efa tafateny sy tapa-kevitra mihitsy aho tamin’izany fotoana izany fa hitondra an-janako hody. Tsy nanam-bola intsony
holaniana amin’ny fandidiana. Tsy tanteraka ny fandidiana tamin’ iny fotoana iny ka miandry ny « valve » hafa izay hovidiana amin’ ity herinandro ity indray izahay dia hiroso amin’ny fandidiana», araka ny fitantaran-dRamoravelo Nicolas hatrany.
Antony iray niteraka ny fahakivian’ity raim-pianakaviana ihany koa ny fahitany tranga iray tao amin’ny hôpitaly nisy azy ireo. «Nisy ankizy nanana aretina nitovitovy amin-janako ihany koa tafaraka efitra taminay. Efa niatrika fandidiana izy saingy mbola niverina toy ny mbola narary indray», hoy izy kivy.
Miezaka hatrany izy mivady mitady izay fomba rehetra hikarakarana ny menaky ny ainy, eny amin’ny hopitaly na eo aza ny fanampiana ataon’ny fianakaviana. Eo ihany koa ny fikambanana iray mikarakara ankizy sendra tsy fahasalamana ka miditra hôpitaly, toy ny mahazo an’i Eugène.
«Tsy nisy ny hoenti-manana tamin’ny fitsaboana indrindra ny fidirana hôpitaly. Voatery nivaro-pananana mihitsy izahay ka namidy ny omby roa sy kisoa maromaro ary ny tanimbary. Mitaiza kely ny vadiko satria vao valo volana monja ny zanakay farany.
Tsy afaka ny mijanona ela aty amin’ny hôpitaly izy noho izany. Tsy manan-kavana eto Antananarivo ihany koa izahay ka voatery mamonjy fodiana», hoy Ramoravelo Nicolas, malok’endrika, mitantara ny fotoan-tsarotra iainan’izy mianakavy eny amin’ny hôpitaly.
Ny fikambanana «Compassion Madagascar» no manampy sy mandray an-tanana ny fikarakarana an’i Eugène sy ireo ankizy vao teraka hatramin’ny 16 taona sendra tsy fahasalamana ka miditra hôpitaly. Ireo olona ao anatin’ny fahasahiranana sy tsy fananana amin’ny fiatrehana ny fitsaboana no tena sahanin’izy ireo. Ny laharana 032 92 297 60 sy ny 034 04 524 58 no ahafahana mandefa fanampiana na tolo-tanana ho an’i Fanomezantsoa Eugène.`
Tsy mba azon’ireo mpitondra antsika ve? ny fahorian’olona toy izao , maninona moa raha manao tsipaipaika ireo membres ao @ gouvernement ireo? vola kely ange zany raha miolotra @ tombotsoa azon-drizareo e!
Isika tsy tokony hiandry an-Rakoto na Rabe fa mba mila manome izay kely mba ananantsika!
ny zanako koa dia mitovitov @ zao. Nisy rano ni lohany. hydrocéphale de naissance mits izy. Voninahitra ho an’i Jesosy irery ihany. Vita ny opération fametrahana valve de dérivation tao @ hopitaly HJRA. Ilay valve dia tsy vidim-bola fa alaina fotsiny. Ny operation tao @ hopitaly HJRA service neuro dia maimaim-poana. Ho anao sendra mahita izao hafayta izao: Jesosy irery ihany no vahaolana. Tsy voatery volabe. Fa ny lohalikao atao fitaovana. Mandoliha, manetre tena, mivavaha, bebaho ny fahotanao rehetra, atolory an’i Jesosy ny fonao, ny fiainanao. Ambarao an’i Jesosy fa na inn na inn fahoriana mandalo aminao dia hatoky azy ianao. Jesosy manana lalana. Tsy takatry ny saina ny programany. Ny lanitra aza efa nomaniny ho anao, ny ainy efa nafoiny dia zinona izai olana mandalo io. Hainy ny zavatra rehetra. Hoy Izy hoe Antsoy Aho dia ho valiako ianao.
marina aiza ireo mpitondra fanjakana ny depiote ny senateur sy ireo olomboafidy isankarazany henoy ny vahoaka ny fitarainany ireo tsy manana afatsy tanampolo ny gidin’ny fiainana indrindra fa ny MPITONDRA FARANTAMPONY HENOY NY ANTSO NY VAHOAKA
Izaho no Rtoa Elizabeth Davina avy amin’ny malagasy, haingana aho te-hampiasa ity fitaovana mba hanapaka fijoroana ho vavolombelona momba ny fomba nitarika ahy ho any amin’ny ara-drariny sy tena findramam mampisambotra izay nivadika ny aiko amin’ny ahitra ny fahasoavana, tsy ho mahantra ny Rich izay vehivavy afaka ankehitriny mirehareha ny iray manan-karena ny fiainana ara-pahasalamana sy ny adin-tsaina na ara-bola tsy misy zava-tsarotra. Rehefa maro volana ny miezaka hahazo bola amin’ny aterineto ary scammed ho any ny isan’ny $ 5.200 Lasa tena mafy ny hahazo bola avy amin’ny ara-dalàna amin’ny aterineto findramam-bola mampisambotra fa tsy manampy ny fanaintainako dia nanapa-kevitra Get mifandray amin’ny namako izay vao nahazo bola an-tserasera, dia voaresaka momba sy ny famaranana dia nilaza tamiko momba ny vehivavy iray nantsoina hoe ramatoa Ashley Alex, izay ny Filoha Tale Jeneralin’ny serviceguaranteeloanfirm (serviceguaranteeloanfirm212@hotmail.com) àry aho nanao sonia tafakatra ho findramam-bola isan’ny ($ 320,000.00USD) amin’ny zanabola ambany dia ambany ny 2%, ka ny bola nekena mora foana, tsy misy ny adin-tsaina sy ny fiomanana izay nataonao mikasika ny famindrana Loan sy amin’ny latsaky ny 2 (roa) andro, ny bola dia manana dia napetraka ao amin ‘ny banky noho izany dia te-manoro hevitra olona mila-bola mba hifandray haingana ity mailaka ity: (serviceguaranteeloanfirm212@hotmail.com) dia tsy mahalala aho manao izao no angatahiko fa Andriamanitra hitahy azy noho ny zava-tsoa izy no nataony teo amin’ny fiainako. Misaotra soa Afaka mitsiky indray aho fahazoan-dalana izany ho orinasa ireo rehetra izay efa voafitaka sy ireo izay efa voafitaka, dia azo itokisana sy ianteherana. Raha tokony ho fantatrao bebe kokoa, mailaka ny orinasa amin’ny (serviceguaranteeloanfirm212@hotmail.com) Alefaso azy anio sy ianao dia ho faly nataonao.
Izaho no Rtoa Elizabeth avy amin’ny malagasy, haingana aho te-hampiasa ity fitaovana mba hanapaka fijoroana ho vavolombelona momba ny fomba nitarika ahy ho any amin’ny ara-drariny sy tena findramam mampisambotra izay nivadika ny aiko amin’ny ahitra ny fahasoavana, tsy ho mahantra ny Rich izay vehivavy afaka ankehitriny mirehareha ny iray manan-karena ny fiainana ara-pahasalamana sy ny adin-tsaina na ara-bola tsy misy zava-tsarotra. Rehefa maro volana ny miezaka hahazo bola amin’ny aterineto ary scammed ho any ny isan’ny $ 5.200 Lasa tena mafy ny hahazo bola avy amin’ny ara-dalàna amin’ny aterineto findramam-bola mampisambotra fa tsy manampy ny fanaintainako dia nanapa-kevitra Get mifandray amin’ny namako izay vao nahazo bola an-tserasera, dia voaresaka momba sy ny famaranana dia nilaza tamiko momba ny vehivavy iray nantsoina hoe ramatoa Ashley Alex, izay ny Filoha Tale Jeneralin’ny serviceguaranteeloanfirm (serviceguaranteeloanfirm212@hotmail.com) àry aho nanao sonia tafakatra ho findramam-bola isan’ny ($ 320,000.00USD) amin’ny zanabola ambany dia ambany ny 2%, ka ny bola nekena mora foana, tsy misy ny adin-tsaina sy ny fiomanana izay nataonao mikasika ny famindrana Loan sy amin’ny latsaky ny 2 (roa) andro, ny bola dia manana dia napetraka ao amin ‘ny banky noho izany dia te-manoro hevitra olona mila-bola mba hifandray haingana ity mailaka ity: (serviceguaranteeloanfirm212@hotmail.com) dia tsy mahalala aho manao izao no angatahiko fa Andriamanitra hitahy azy noho ny zava-tsoa izy no nataony teo amin’ny fiainako. Misaotra soa Afaka mitsiky indray aho fahazoan-dalana izany ho orinasa ireo rehetra izay efa voafitaka sy ireo izay efa voafitaka, dia azo itokisana sy ianteherana. Raha tokony ho fantatrao bebe kokoa, mailaka ny orinasa amin’ny (serviceguaranteeloanfirm212@hotmail.com) Alefaso azy anio sy ianao dia ho faly nataonao.
Izaho no Rtoa DAvid Freeman avy amin’ny malagasy, haingana aho te-hampiasa ity fitaovana mba hanapaka fijoroana ho vavolombelona momba ny fomba nitarika ahy ho any amin’ny ara-drariny sy tena findramam mampisambotra izay nivadika ny aiko amin’ny ahitra ny fahasoavana, tsy ho mahantra ny Rich izay vehivavy afaka ankehitriny mirehareha ny iray manan-karena ny fiainana ara-pahasalamana sy ny adin-tsaina na ara-bola tsy misy zava-tsarotra. Rehefa maro volana ny miezaka hahazo bola amin’ny aterineto ary scammed ho any ny isan’ny $ 5.200 Lasa tena mafy ny hahazo bola avy amin’ny ara-dalàna amin’ny aterineto findramam-bola mampisambotra fa tsy manampy ny fanaintainako dia nanapa-kevitra Get mifandray amin’ny namako izay vao nahazo bola an-tserasera, dia voaresaka momba sy ny famaranana dia nilaza tamiko momba ny vehivavy iray nantsoina hoe ramatoa Ashley Alex, izay ny Filoha Tale Jeneralin’ny serviceguaranteeloanfirm (serviceguaranteeloanfirm212@hotmail.com) àry aho nanao sonia tafakatra ho findramam-bola isan’ny ($ 320,000.00USD) amin’ny zanabola ambany dia ambany ny 2%, ka ny bola nekena mora foana, tsy misy ny adin-tsaina sy ny fiomanana izay nataonao mikasika ny famindrana Loan sy amin’ny latsaky ny 2 (roa) andro, ny bola dia manana dia napetraka ao amin ‘ny banky noho izany dia te-manoro hevitra olona mila-bola mba hifandray haingana ity mailaka ity: (serviceguaranteeloanfirm212@hotmail.com) dia tsy mahalala aho manao izao no angatahiko fa Andriamanitra hitahy azy noho ny zava-tsoa izy no nataony teo amin’ny fiainako. Misaotra soa Afaka mitsiky indray aho fahazoan-dalana izany ho orinasa ireo rehetra izay efa voafitaka sy ireo izay efa voafitaka, dia azo itokisana sy ianteherana. Raha tokony ho fantatrao bebe kokoa, mailaka ny orinasa amin’ny (serviceguaranteeloanfirm212@hotmail.com) Alefaso azy anio sy ianao dia ho faly nataonao.
Tonga soa eto amin’ny HAREN’ILAY Loan FIKAMBANANA.
harena findramam-bola institiota dia manolotra bola Fampiasam-bola amin’ny zanabola ambany dia ambany indrindra
, Dia manolotra bola manokana, Debt fanamafisana Loan, Venture Capital, Business Loan, Fanabeazana
Loan, Home Loan, ary ny findramam-bola noho ny antony sy ny zavatra ilaina maika !. amin’ny ambony indrindra faharetan’ny fotoana.
Efa efa nihodina teo noho ny banky? Ratsy ve ianao voninahitra? Ve ianao faktiora tsy voaloa? Moa
ianao amin’ny trosa? No ilainao mba hanorina raharaham-barotra? Manahy intsony, harena bola institiota dia eto mba hanolotra anareo ho ambany
liana findramam-bola. Ny findramam-bola ny fiaretana $ 5.000-USD (dimy arivo dolara Amerikana) ho
$ 50, 000,000.00. (Dimam-polo tapitrisa dolara Amerikana).
Raha toa ianao ka liana, fifandraisana harena bola institiota alalan’ny Email eto ambany:
1. Ny Full anarana: _______
2. Contact adiresy: _______
3. tany Residence: ______
4. Loan tontalim-bola nilaina: ________
5. Duration: _____
6. Gender: _____
7. Asa: ________
8. Fidiram-bola Isam-bolana: _______
9. Date Teraka: ________
11.have ianao rehefa nanolotra-bola >> eny na tsia
harena findramam-bola institiota.
>>> Misaotra>.Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite Translator
Mamaha ny olana ara-bola ao anatin’ny 24 ora.
Mpanazava Salary na tompona orinasa ve ianao?
Mialà 1 000 Euro – 200.000, 000 Euro Loan anatin’ny 24 ora
tsy misy fiantohana.
Ny vahaolana tsotra.
Raha mila fangatahana bebe kokoa dia mifandray aminay: Immaculateloanprovidersltd@gmail.com
Tale: i Benjamine
na mitsidika ny sampanay: Level 29, Tiffany Tower, Jumeirah Lakes Towers Dubai. Emira Arabo Mitambatra
Izaho no Mesia Josh Hawley, mpampindram-bola manokana iray izay manome trosa fanararaotana fiainana ho an’ny olona, fikambanana, fikambanana, sns amin’ny 2% tahan’ny zanabola raha tsy misy fiantohana …. Mila vola avy hatrany ve ianao handoa ny trosanao na Mila trosa hanatsarana ny orinasa ve ianao? Nolavin’ny banky sy ny andrim-panjakana hafa ianao? Mila fividianana fanamafisana na fananana antoka ve ianao? Ny zava-mampahory anao dia efa tapitra satria eto izahay mba hametraka ny olana ara-bola rehetra anananareo amin’ny lasa.
Mifandraisa aminay amin’ny mailaka amin’ny (Joshhawleyloanfirm@gmail.com) ho an’ny antsipiriany bebe kokoa.